राति अबेरसम्म निन्द्रा लाग्दैन ? अपनाउनुहोस् यी उपाय — Imandarmedia.com
राति अबेरसम्म निन्द्रा लाग्दैन ? अपनाउनुहोस् यी उपाय
अनिन्द्राबाट बच्न, राति अबेरसम्म जागा बस्नु हुँदैन । थकाइ लागेको समयमा नै सुत्नुपर्छ । साथै सधैं दिनहुँ सुत्ने र उठ्ने समय एकनाशको हुनु पर्दछ । यस अलावा सुत्ने ओच्छ्यान र वातावरण निन्द्रा जगाउने खालको हुनु पर्दछ । सुत्ने कोठा अँध्यारो र शान्त हुनुपर्छ । एजेन्सीको सहयोगमा